#Iccitii dhokataa hunda gadi baasnee fashaleessina. Jaarsummaa garee 3’n ijaarame! – Kichuu
HomeNewsAfrica#Iccitii dhokataa hunda gadi baasnee fashaleessina. Jaarsummaa garee 3’n ijaarame!
#Iccitii dhokataa hunda gadi baasnee fashaleessina.
Jaarsummaa garee 3’n ijaarame!
Abiyyi Ahimeed yeroo kufaatin isaa sa’aa 11ffaa irra gahee jiru kanatti, kufaatii kana irraa of hambisuuf dhidhitachaa jira.Tooftaan dhidhiitannoo isaa keessaa tokko jaarsummaa Oromoo ittin nyaatu garee gareen ijaaree carraa isaa dur gube sanatti ofumaa dhama’uudha.
Garee 3 ijaarame kun:
1. Gareen kun hoggansa KFO ala jiru jala deemuun filannoo hirmaatan malee jedha. Gareen kun kan nama gaddisiisu kanaan dura ‘jaarsummaa jedhee osoo dalaguu shira Abiyyii fi OPDOn Oromoo nyaachise sana irraa barrachuu illee warra dadhabee dha. Sababaan ‘jaarsummaa kanaas dhiibbaa Ameerikaa fi EU’n godhaa jiran jalaa ooluu yoo ta’u, murtii Senetii USA dheengada dabarse ragaa dha.
2. Garee Mana hidhaatti naanna’uu dha. Gareen kun ala/ Ameerikaa namoota dhufan akka hammatu dhaga’een jira. Warri Amantiin daldalus keessa jiru. Silaa keessattuu amantii Orthodox Taadasaa fi Bizuneesh Kabadee nyaachisuun qabee nubiraa hafuu dideera.
Amma immoo kan hordoftooti amantii kaanis itti dabalamaniiru. Gareen kun kan xiyeeffatee humni Oromoo murteessaa fi bal’aan mana hidhaa jiru kun warra ala jiraniin filannoo akka gaggeesatan dhiibuu dha. Mana hidhaa keesssa taa’eetu ajjabumaaf Abiyyiif jecha filannoo kakaasa jechuu dha. Gudii dha!
3. Garee 3ffaan kun “ani garee bilisaati” jedha. Abiyyi bira jaarsummaa deemnee sagalee Jawaar fi Baqalaan yeroo isa fonqolchuuf mari’atan bohaa nu dhageesise jennaan afaan qabannee baane jedhee odeessisa. Jarri kun Abbaa Gadaa, Abbaa Qabeenyaa,Abbaa amantii… Maqaa jedhu taargaa ofitti dhahatee masaraa minilk deemeen laaqanna nyaadhe jedhee warra torbee tokko odeessuu dha. Biyyee haanyaattu!
Seenaa Oromoo keessatti jarsummaan sirna nafxanyaa kufaatii irraa hambisuuf godhamu uumata Oromoo baayyee duubatti deebisuun aarsaa baay’ee nu kafalchiiseera.
Kan nama dhibu immoo jaarsummaan amma jedhamu kun hunda kan hammate miti. Asumatti warra KFO dubbisanii, warra A
Waan oromoon ta’e bineesiisi hintaane, yoo onne qabaane kana keessa yaroo dhiiyooti nibaana!!!!!!!!
— Kichuu (@kichuu24) March 26, 2021
Namni Oromo jibbu bode issa akkanat jiibame Adunyaan yakka issa irra sa’a 24/7 hasofti. – https://t.co/VxaP9VGm58 pic.twitter.com/uH0dNeRNpr
— Kichuu (@kichuu24) March 27, 2021
Guddisa Maallas Zeenawwii ta’uu kee hojiin agarsiifteetta!